Fahatsiarovan-tena sy fampiharana ny vokatra vita amin'ny pasta 1-singa sy ny adhesives
by Delta Engineering / Alatsinainy 19 Janoary 2015 / Published in mandeha ho azy
Fampiharana automatique ny vokatra 1-singa pasty
Ny DAT 300 dia natao ho an'ny doka sy fampiharana ny vokatra vita amin'ny pasty 1 sy ny adhesives toa ny PUR, hybrids, silicones, PVC. Ny fatra fametrahana dia fitifirana kely indrindra, saingy azo ampiasaina amin'ny fitrandrahana mitohy koa.
Azo atao ny fanafana na ampiasaina amin'ny fametrahana ny mari-pana io fametrahana io ary matetika ampiasaina miaraka amin'ny robot na XYZ-latabatra.
Raha betsaka ny vokatra vita amin'ny volombava kely (prototypes) dia azo atao ny manomboka amin'ny famatsiana vokatra ivelan'ny cartridges. Rehefa lehibe ny volany dia afaka mamatsy amin'ny lay ny vokatra.